✔ Admin on January 17, 2014
29 arday oo isgu jiray 19 will iyo 10 gabdhood oo kamid ahaa da'yarta Dugsiga Daar Aw Cumar ee Xifdinta Quraanka Kariimka ,tajwiidka iyo waxbarashada asaasiga ah ayaa maantay xaflad shahaadooyin lagu gudoonsiiyay loogu qabtay magaalda Baargaal kadib markii ay quraanka kariimka xifdiyeen.
Xaflada ayaa waxaa goob joog ka ahaa waalidiinta da'yarta , Masuuliyiinta waxbarashada, Maamulka Degmada iyo dadwayne jecel barashada iyo xifdinta quraanka
Xafladan Ayaa Da'yarta iyo waalidiintoodaba qiimo badan ugu fadhiday ayadoo Culimadii iyo aqoonyahanadii ka hadlay munaasabadaas ay si fiican uga hadleen fadliga iyo Nuurka uu leeyahay quraanku , taasoo xiiso badan u yeeshay in Da'yar Badan iyo waliba dad waawayn ay niyada ku qabtaan sidii ay quraanka u xifdin lahaayeen.
Ugu horayn waxaa munaasabada ka hadlay Shiikh daahir faatax oo amaanay maamulka dugsiga Dar aw Cumar dadaalka ay u galeen inay ubadka baraan kalaamka alle oo ah quraanka uuna yahay wax la barto dadkana la baro kan ugu khayrka badan.
waxaa markaasi kadib la wareegay hadalka maamulha iyo aasaasaha Dugsiga Daar Aw cumar Shiikh Cawil Jaamac muuse oo ku dheeraaday taariikhda Dugsiga daar Aw Cumar asagoo shegay inuu dugsigu isugu jiro labo qaybood oo kala ah qaybta xifdinta quraanka iyo qayb kale oo lagu barto waxbarashada asaasiga ah , asagoo intaasi ku daray inay xooga saareen inay ubadka baaran dhaqanka islaamka iyo tarbiyada maadaama waxbarista oo dhan ay ka bilaabanto aadaab suuban.
Xafladan loo qabtay 29-ka arday ayaa waxaa sidoo kale hadalo qiimo leh ka jeediyay waalidiin , xubnu kamid ah guddiga waxbarashada , Culimo iyo marti sharaf kale oo badan , kuwaaas oo dhamaan ku booriyay waalidiinta inay ku dadaalaan sidii ay u xoojin lahaayeen gacan ku haynta Da'yartaasi si aan quraanku uga lumin , sidoo kalena ugu duceeyeen inay noqdaan kuwo ku dhaqma quraanka ay xifdiyeen.